Foomam iyo caddeymo
Foomam caadi ah iyo caddeymo laguugu talo galay adigaaga shaqo la’aanta ah.
Marka aad a-kassa lacag ka dalbaneysid
Marka aad markii ugu a-kassa iska qoreysid, aad warkaagi hore wax ka beddeleysid, sanadka aad warkaaga a-kassa u gudbineysid.
U sheegidda shaqo la’aantaada ee a-kassada
Ma shaqeyneysay shaqo la’aanta ka hor? Markaas waa in shaqo bixiyahaagi hore uu buuxiyaa caddeynta shaqo bixiyaha oo uu u diraa a-kassadaada.
Caddeynta shaqo bixiyaha
Ma shirkad ayaad lahayd inti aadan shaqo la’aan noqon? Markaas waa in aad buuxisaa caddeyta shaqada ee loogu tala galay shaqo bixiyaha, una dirtaa akassada.
Caddeynta shaqada ee loogu tala galay shaqo bixiyaha
Miyaad buuxisay shuruudo shaqo, isla mar ahaantaasna ma qaadataa taageero dhaqaale oo wax qabad? Markaas waxaad isticmaaleysaa foomkan, waxaadna u direysaa a-kassada:
Dalabka a-kassada ee ku aaddan caddeynta shuruudaha shaqada
Adigaaga shaqo la’aanta ah waxaad lacagta shaqo la’aanta u qaadan kartaa si aad shaqo uga raadsatid waddan kale oo ka tirsan Midowga Yurub, ururka Iskaashiga dhaqaalaha ee Yurub ama Switzerland. Caddeynta U2 ayaad markaas uga baahantahay IAF:
Caddeyn loogu tala galay in Midowga Yurub gudihiisa shaqo looga raadsado
Marka la gaaro waqtiga shaqo billaabidda cusub (nystartsjobb)
Marka uu shaqo bixiye kugu shaqaaleysiin rabyo shaqo billaabid cusub (nystartsjobb) waxaad u baahantahay in aad foomkan buuxisid, una geysid a-kassada:
Foom loogu tala galay isu ururinta oo ku aaddan caddeymaha
Foomam loogu tala galay shaqo billaabidda cusub (nystartsjobb) oo shaqa bixiyuhu uu buuxinayo:
Codsiga shaqo billaabidda cusub (isagoo foom lagu sameynayo)
Codsiga shaqo billaabidda cusub (isagoo Bank-id lagu sameynayo)
Codsiga dheereynta (isagoo foom lagu sameynayo)
Codsiga dheereynta (isagoo Bank-id lagu sameynayo)
Wargelin ku saabsan isbeddel ku aaddan shaqo-bilaabid cusub qof ku shaqaaleysiinta
Codsiga xagga lacagta marka aad ka qeyb qaadaneysid taageero ama barnaamij
Haddii aad ka qeyb qaadaneysid mid ka mid ah taageerooyinkeenna ama barnaamijyadeenna waxaad qaadan kartaa taageero dhaqaale oo xagga dhaqdhaqaaqa ah, lacag xagga horuumarka ah ama lacag sal dhigasho. Qasnadda ceymiska ayaad bil walba lacagta ka dalbaneysaa:
FOOMAMKU WAXAY AG YAALLAAN Qasnadda ceymiska
Haddii aadan go’aan ku qanacsaneyn
Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aan aan gaarnay waxaad codsan kartaa in go’aanka dib loo eego:
Sidan ayaad sameyneysaa
Ma lagu siiyay digniin ama go’aan ku aaddan in hoos loo dhigayo lacagta taageerada dhaqdhaqaaqa, lacagta horuumarka ama lacagta saldhigashada? Inta aanan gaarin go’aan kama dambeys ah waxaad fursad u heysataa in aad aragtidaada dhiibatid:
Arrinta lagaagala soo xiriiro ka jawaab inta aan la gaarin go’aanka digniinta ama cunna qabateynta